I-Telegram ihlaziywa kwi-Mac kunye nesicelo esibhalwe ngokutsha kwi-Swift 3.0 | Ndisuka mac
Ngoku asifumananga uhlaziyo lwesicelo semiyalezo yeTelegram yeMac ixesha elide kwaye sele sinayo phakathi kwethu Inguqulelo 2.92 eyongeza inkqubela phambili ebaluleke ngokwenene. Kwaye banako ibhalwe ngokupheleleyo ukusuka ekuqaleni ngesixhobo se-Swift 3.0, yintoni ngokomgaqo ekufuneka ibonelele ngezibonelelo ezingcono ngokubanzi kwisicelo seMac, uzinzo kunye nesantya, ewe, ngoku ngoku iya kuba nayo okanye inokuba neencukuthu ezinje ngale sizifumene xa uphendula umntu obhalileyo imigca emqolo, ekuvumela kuphela ukuba "ukope" umgca wokuqala. Kodwa ngokubanzi ziinkcukacha eziza kupolishwa njengoko iintsuku zihamba kwaye ezi nguqulelo zilandelayo.
Kule meko ukongeza ekubhaleni kwakhona kwesicelo Singafumana ezinye iinkcukacha zamanqaku amatsha aphunyezwe kuhlobo olutsha lweTelegram yeMac:
Uzinzo ngokubanzi ngokubanzi kunye nesantya
Isantya sophuhliso olungcono, siya kufumana uhlaziyo olutsha rhoqo rhoqo
Isincamathelisi esecaleni kunye ne-emoji kwizikrini ezibanzi
Ukongeza koku, baqinisekisa ukuba uhlaziyo olulandelayo lwesi sicelo semiyalezo siza kongeza izinto ezintsha esiza kuzithanda. Ukuba ulungisa ezi nkcukacha zincinci zinokuba nohlobo lwangoku kwaye uqhubeke nokuphucula ezinye, yintoni enye onokuyicela. Ngoku khange basihlaziye isicelo ixesha elide kwaye isizathu sinokuba yile, isicelo esitsha ngolwimi lwe-Swift 3.0. Ngokubanzi, zibonakala ngathi luphuculo olubalaseleyo oluya kuthi luxatyiswe ngabo bonke abasebenzisi. Ndivela eMac singabasebenzisi abasebenza kwesi sicelo njengoko uninzi lwenu sele nisazi kwaye singatsho ukuba sisicelo esibalulekileyo kuthi. Khumbula ukuba Esi sicelo simahla kunye nohlaziyo lwabo bonke abo sele benesicelo esifakelweyo luyafumaneka ngqo ukusuka kwithebhu yohlaziyo lweVenkile yeApple yeMac.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Mac App Store » I-Telegram ihlaziywa kwi-Mac kunye nesicelo esibhalwe kwakhona kwi-Swift 3.0